Akụkọ Greg Kimball na Martech Zone |
Edemede site na Greg Kimball
Greg bụ onye isi zuru ụwa ọnụ nke ngwọta email na nkwado. Ọ bụ onye okike na onye na-ewu ụlọ. Ma ọ na-emepụta weebụsaịtị, ịmepụta netwọk mmekọrịta, ma ọ bụ wuo ụlọ elu, usoro a bụ otu ihe ahụ; nkọwa bụ egwuregwu. Ọ na-enwekwa mmasị igwu egwu.
Kedu ka Nchedo Nzuzo Mail nke Apple (MPP) si emetụta ahịa email?
Site na mwepụta iOS15 n'oge na-adịbeghị anya, Apple nyere ndị ọrụ email ya Nchedo Nzuzo Mail (MPP), na-amachi iji pikselụ nsuso tụọ omume dị ka ọnụ ahịa mepere emepe, iji ngwaọrụ, na oge ibi. MPP na-ezochikwa adreesị IP ndị ọrụ, na-eme ka nleba anya ọnọdụ ọnọdụ karịa. Ọ bụ ezie na iwebata MPP nwere ike iyi ihe na-agbanwe agbanwe na ọbụna dị egwu nye ụfọdụ, ndị ọzọ na-eweta igbe ozi (MBPs), dị ka Gmail na Yahoo, na-eji usoro ndị yiri ya eme ihe ruo ọtụtụ afọ.